ngu Ml Yunus Patel (DB)
Inyanga ye Ramadhaan ifike njengemvula ehamba nesiphepho yasho idlula njalo. Lemvula
ayizange inisele izitshalo nezilimo- kodwa iye yanisela ezinhliziyweni zamakholwa.
Kubuhlungu kona, noma kuyiqiniso elimsulwa, ukuthi izinhliziyo zeningi lama Muslim beliququdwa yisomiso sokholo kanye nokubuna kwalo ukholo belu. Lesisomiso sibangwa wukugxila emisebenzini engahambisani nokholo lwe Islam, wukungaziphathi kahle, yizenzo
ezingenabulungiswa kuzo, ukuhwebelana okungenaqiniso njll. Isomiso esiwumphumela wokunganethi kwemvula sibhubhisa izitshalo- kanti isomiso esidalwa wukuphela kokholo olunzulu,
wukuphelelwa wukwesaba u Allah kanye nokwazisa ubukhona buka Allah kubhubhisa UKHOLO lwenhliziyo.
Izimvula zokholo nge Ramadhaan ziye zabuyisa ukuphila ema Masaajid kanjalo nezinye izindawo
zokukhonzela. I Ramadhaan iye yabhebhezelisa inhlansi yokunikela ebisizifela. I Ramadhaan
iye yavusa umoya wokubekezela obusufa, kanjalo nowokuqinisela kanye nowozwelo kulabo
abangazange babe nenhlanhla.
Njengoba sesifike ekupheleni kwenyanga ka Ramadhaan umbuzo omkhulu okhona yilowo othi
kumele kwenziweni? Kungabe sidlule kukho konke lokuya kuvocavoca ukholo kwi Ramadhaan
ukuze sibe nenkululeko yokuthi ngosuku lwe Eid sizikholise ngalolonke uhlobo lokonakala, nokuzijabulisa ngendlela enobunja nengenamahloni na ? Kungabe besizithiba ekudleni kanjalo naseziphuzweni oku Halaal kanye nakokunye ukuzijabulisa kusukela kusempondo zankomo kuze
kuyoshona ilanga i Ramadhaan yonke, ukuze sibuyele ngamandla avuselelwe emikhubeni yethu
emibi yokugembula, ukuphuz'utshwala kanye nokuphinga? Kungabe umoya wokubekezela, wozwelo, wokunikela, wokuqinisela kanjalo nowomunyu uzobe usabonakala noma lezizimo
sezizogoqwa zibekwe kuze kube kuntwela ezansi i Ramadhaan elandelayo na?
Kungabe ama Masaajid abehlale egcwele echichima cishe ubusuku bonke nge Ramadhaan, azoqhubeka nokugcwala noma aseheleza umoya asale ezibuza ukuthi bashonephi abathenjwa beNkosi? Izimpilo zethu ngemuva kwe Ramadhaan zizokhombisa ukuthi ngabe inyanga ye Ramadhaan siyisebenzisele ukuzishintsha okuphelele thina ngaphakathi noma lelithuba eliyingqayizivele sizolilahlela kude le?
Isimo somphakathi wama Muslim ezweni lonke kanjalo nasemhlabeni wonkana liyasokolisa.
Ama Muslim alilela ukulahleka kwemiphefumulo, ukubhubha kwezakhiwo, ingcindezelo, ukusweleka kobulungiswa kanye nenqwaba yezinkinga ezikhungethe umhlaba wonke. Ayamangala
ukuthi kungani usizo luka Allah oluthenjiswe amakholwa lungasabonakali nangokhalo. Ukuthi nje
nhla ezimpilweni zengxenye enkulu yama Muslim kwenele ukuphendula lowombuzo. Izigidi ngezigidi zama Muslim azisenalutho ezingalukhombisa ukuthi zingama Muslim ngaphandle kwamagama azo ama Muslim ezaqanjwa wona kuphela.
Usizo luka Allah luza ngokukhuthala kanye nobunjalo obune Islam phakathi- alusoze lweza ngamagama kanye nobuso.
Sengathi u Allah Ta'ala ngosuku lomkhosi we Eid angasinikeza ukuholeleka ekutheni sithathe isinqumo sokuthi sesizokwenza i Qur'an kanye ne Sunnah kube ngukukhanya kwethu okusiholayo,
sibuye sizijwayeze ukusebenzisa i Islam ngawo wonke amandla esinawo. Uma labo abangakholwa
abayizakhamizi ezweni lethu bengabona i Islam ezimpilweni zama Muslim, abasoze badinga
ukunxenxwa ngamandla ukuba bamukele i Deen yethu enhle kangaka.